पर्वतमा १८ बर्ष माथिका ३३ प्रतिशतले लगाए कोभिडको पहिलो खोप – Parbat News
१७ साउन, पर्वत । जिल्लाका कुल खोप लक्षित उमेर समूहका ३३ प्रतिशतले कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो डोजको खोप लगाएका छन् । स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतका प्रमुख डा. भोजराज गौतमका अनुसार जिल्लाका कुल लक्षित समूह मध्ये पहिलो डोज ३३ र दोस्रो डोज १० प्रतिशतले लगाएका हुन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारले शुरुवात गरेको कोभिड विरुद्धको निशुल्क खोपको अभियान अहिलेको सरकारले पनि सञ्चालन गरेको छ । यस अघिको सरकारले खरिद सम्झौता गरेको १ करोड २६ लाख खोप नियमित रुपमा आपूर्ति भएपछि देश भर जस्तै पर्वत जिल्लामा पनि खोपलाई नियमित तालिका बनाइएको छ ।
डा. गौतमका अनुसार १८ बर्ष उमेर समूहका ८२ हजार जनसंख्या पर्वतमा रहेको अनुमान गरिएको छ । त्यो मध्ये पहिलो डोज २६ हजार ९ सय २४ जनाले लगाएका छन् । भने दोस्रो डोज ८ हजार ७२ जनाले लगाएका छन् । कुल ३२ हजार ३ सय २१ डोज अहिलेसम्म खपत भएको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा कोभिसिल्ड, भेरोसिल्ड र जन्सन एन जन्सन कम्पनीका गरी ३ कम्पनीका खोप लगाइएको छ । खोप अभियान अन्तर्गत ५० बर्ष भन्दा माथि उमेर समूहका सवैलाई खोप आगामी १ साता भित्र पुरा हुने स्वास्थ्य कार्यालयको भनाई छ ।
जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र फलेवास, पैयू, विहादी र महाशिलामा भने यो उमेर समूहको लागि खोप लगाइ सकिएको कार्यालयले जनाएको छ । केहि छुट मानिसहरुलाई भने अर्को चरणमा समावेश गरिने डा. गौतमले जानकारी दिए ।
जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र अन्तर्गत कुश्मा, जलजला र मोदी गाउँपालिकामा भने भोली देखि खोप सेवा सञ्चालन हुनेछ । यो अवधिमा ५० बर्ष देखि माथिल्लो उमेर समूहका मानिसलाई खोप लगाइनेछ ।
Slider News • आर्थिक • ताजा अपडेट • मुख्य समाचार • राष्ट्रिय / देश • विशेष • समचार
जलजलाको युवा संघको भेला सम्पन्न, अधिकारीको नेतृत्वमा ५१ सदस्यीय कमिटि गठन
५ दलीय गठबन्धन धरापमा परिसक्यो–नेता गिरी
Slider News • ताजा अपडेट • मुख्य समाचार • राजनीति • राष्ट्रिय / देश • विशेष • समचार
जनसांस्कृतिक महासंघ नेपाल पर्वतको जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न
फलेबासको केन्द्र सार्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतद्धारा सदर, उपप्रमुख अधिकारीको रिट खारेज
पर्वतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको प्रयास : बर्राचौरमा १५ शैयाको अस्पताल भवनको शिल्यान्यास